DAAWO: Barnaamijka Bandhigga Wareysiyada oo laga daawan doono SNTV – Radio Muqdisho
DAAWO: Barnaamijka Bandhigga Wareysiyada oo laga daawan doono SNTV
Barnaamijka Bandhigga Wareysiyada oo ka mid ah barnaamijyada maalinlaha ah ee ka baxa Radio Muqdisho ayaa lagu soo kordhiyay Telefishanka Qaranka Soomaaliyeed SNTV.
Caawa oo ay taariikhdu tahay 20 January, 2015, ayaa SNTV laga bilaabi doonaa in laga daawado Barnaamijka Bandhigga Wareysiyada oo muuqaal ah, waxayna daawadeyaashu ka heli doonaan dhammaan wararkii iyo wareysiyadii ku baxay Barnaamijka.
“Barnaamijkaan wuxuu soo socday muddo shan sano ka badan, isagoo habeen walba marka jimcaha laga reebo ka baxa Radio Muqdisho, waa barnaamij siyaasadeed oo aad u xiiso badan, dad badan ayaa ku xiran, wuxuuna diiradda saarayaa wararkii iyo dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa 24kii saac ee ka horreysay xilliga uu soo galo” ayuu yiri agaasimaha Radio Muqdisho Cabdiraxiim Ciise Caddow.
Barnamijka Bandhigga Wareysiyada waxaa Radio Muqdisho laga billaabay bishii October snadkii 2009kii, waa mid ka mid ah barnaamijyada loogu dhagaysiga badan yahay idaacadda wuxuuna soo galaa 9:30 fiidnimo ee xilliga magaalada Muqdisho.
“Barnaamijkaas inuu ka baxo isagoo muuqaal ah SNTV waxaan u aragnay inay muhiim tahay, wuxuuna bilaaban doonaa caawa hadduu Alle idmo” ayuu sii raaciyay.
Barnaamijyada Kulanka Toddobaadka, Dakhtarka Waydii, Islaamka iyo Nolosha iyo Fanka iyo Fannaanka ayaa ka mid ah barnaamjyada Radio Muqdisho ee ayagoo muuqaal ah haddana ka baxa Telefishanka Qaranka Soomaaliyeed.